मध्यरातमा ठमेलको एक सुन्सान कोठामा पुगेका बाबुले आफ्नै छोरी भेटेपछी - Sudur Khabar
माईक्रोबाट हामी नजिकको ठमेल बजार तिर हिड्यौं । गाडी भाडा नी उनले नै तिरिन् । ठमेलको त्यो ब्यस्त सडकमा उनी अघि अघि र म पछि पछि हिड्यौं र हिडिरह्यौं।
यसरी केटीको पछि त जवानीमा लब पर्दाकी ती निस्तुरी मोरीलाई पनि गरेको थिइन् । यताउता नजर डुलाउँदै, कोही चिने देखेको मान्छे भेट भई हाल्छ कि भनी डराउँदै, म छिटो छिटो पाईला चाल्दै थिए । गल्लि भित्रको गल्ली भित्र एउटा तीन तल्ले घर भित्रको सुनसान कोठा भित्र उनले मलाई लगिन् र भित्रबाट चुक्कुल लगाईन् ।
…पत्थर त पग्लिन्छ स्त्रीको यौवनमा, म त झन् लोग्ने मान्छे ! आगोका अगाडि मैन पग्लिन्न भनेर कहाँ पो बस्न सक्छ र ? चुम्बकले फलामलाई तानेझैं तान्न सक्ने त्यस्तो के चिज राखि दिएकोछ स्त्रीको देहमा ईश्वरले ? जसका कारण म रत्नपार्कबाट तानिदै तानिदै यहाँ ठमेलको सुनसान कोठा सम्म आई पुगे । आखिर यो आकर्षण के हो ?
म यताउता हेर्न थाले । एउटा खात, म बसेको कुर्सी, उनी र अत्तालिएको मन भएको म लाग्ने मान्छे बाहेक अर्को कुनै चिज थियो त त्यहाँ शुन्यता ! रंगिन संसारमा रंगिन पल बिताउन आएको म मान्छेले बिपनामै रंगिन सपना देख्न थाल्यो, कल्पनामा डुब्न थाल्यो । उनका ती नशालु अधरहरू, बारूली कम्मर, अनि पुक्क उठेका ती बदनहरू । म एक्लै बहुलाउन थाले । कताकताबाट म भित्रको पुरूष जाग्रीत हुन थाल्यो । आफुले लगाएको मास्क निकालेर ओछ्यानमा राखे र आफ्नो शरिरलाई त्यही ओछ्यानमा पल्टाए र आँखा चिम्म गरेर हराउन थाले रंगिन संसारमा ।
आखिर पत्थर त पग्लिन्छ स्त्रीको यौवनमा, म त झन् लोग्ने मान्छे ! आगोका अगाडि मैन पग्लिन्न भनेर कहाँ पो बस्न सक्छ र ? चुम्बकले फलामलाई तानेझैं तान्न सक्ने त्यस्तो के चिज राखि दिएकोछ स्त्रीको देहमा ईश्वरले ? जसका कारण म रत्नपार्कबाट तानिदै तानिदै यहाँ ठमेलको सुनसान कोठा सम्म आई पुगे । आखिर यो आकर्षण के हो ? यो तृष्णा के हो ? केटिको काँचो मासु नै खान मन लाग्ने लोग्ने मान्छेको भोक कस्तो हो ? म मनमनै गम खाँदै बस्न थाले ।
अचानक ठुलो भुईचालो आयो । म खाटबाट जुरुक्क उठे र भुईमा थचक्क बसे । आफुले आफैलाई सम्हाल्नै नसकिने गरी मेरो धरातल हल्लिरहेको थियो । मेरा हात खुट्टा कामिरहेका थिए, अनुहार भरि पसिनै पसिना थियो । जसरी चोरलाई पुलिसले समात्दा चोरको हविगत हुन्थ्यो, मेरो हविगत नी त्यस्तै त्यस्तै भएको थियो । ….. मैले यताउता हेरे । अध्याँरो कोठाको खाटमा पल्टिरहेकी मेरी बुढीले उठेर भनी– निकै नराम्रो सपना देख्नु भो कि क्या हो ?